Waxaa sii xoogeysanayo walaaca laga qabo Soomalidii lagu laayey dagaalka Etoobiya iyo Tigareeda | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Waxaa sii xoogeysanayo walaaca laga qabo Soomalidii lagu laayey dagaalka Etoobiya...
Waxaa sii xoogeysanayo walaaca laga qabo Soomalidii lagu laayey dagaalka Etoobiya iyo Tigareeda
Waxaa soo xoogeysanaya walwalka iyo walaaca laga qabo, gaar ahaan waalidiintooda masiirka dhallinyaradii Soomaaliyeed ee dalka Eritrea loo qaaday. Waxaa soo baxaya xog ah in qaarkood loo adeegsaday dagaalka ka socda Gobolka Tigreega. Waalidiinta wiilashooda maqanyihiin waa in ay is urursadaan oo ay si wadajir Dowladda uga dalbadaan in ay ubadkoodii u soo celiso.
Guddoonka iyo Guddiyada difaaca labada aqal ee Baarlamaanka waa in ay hawshan u istaagaan, baaritaanna ku sameeyaan, lana kulmaan waalidiinta wiilashoodu maqan yihiin.
Xisbiyada siyaasadda, murashaxiinta, warbaahinta, bulshada rayidka ah iyo odayaashii damiinka ka ahaa wiilasha waa in ay dowladda ku cadaadiyaan in ay dalka dib ugu soo celiso dhallinyaradaas inta nool, qancisana waalidiinta ubadkoodu maqanyahay.
Ma jirto khiyaanno qaran oo ka weyn, haddii ay dhab noqoto in wiilal Soomaaliyeed sidii xaabadii oo kale loogu shiday dagaal ahli ah oo dowlado shisheeye ka dhex socda, waana in lagula xisaabtamo madaxweynaha iyo masuuliyiinta kale ee hawshaas ku lug yeelata.
Qore : Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
Previous articleMareykanka iyo Soomaaliya: ‘Weli Mareykanka waxaan uga baahannahay sugidda amniga
Next articleALI YAXYE: “WHO REALLY RULES OUR COUNTRY?”
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee dowlad Goboleedka Puntland, ayaa shaacisay inay joojineyso qorsho Soomaaliland ay ku dooneyso in Imtixaanaadka Iskuulada uga sameeyso...
Xogahayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo la kulmay xubno ka tirsan...
Mas’uuliyiinta kubadda cagta Somaaliya oo shaqada ka eryay tabaabaraha kubadda...